DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP P2055 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Revo Uninstaller bụ mmemme nke ị nwere ike iji kpochapụ kọmputa gị n'ụzọ dị oke mkpa. Ihe dị iche ya bụ na ọ nwere ike ihichapụ faịlụ mmemme site na folda ndị ọrụ na akwụkwọ ndekọ ndị ọzọ na diski ike nke kọmputa.
Njirimara nke Revo Uninstaller abụghị nanị na mwepụ nke mmemme. Iji ọrụ a, ị nwere ike ihichapụ nchekwa nke ihe nchọgharị na ngwa ndị ọzọ site na faịlụ nwa oge, wepụ faịlụ ndị dị mkpa, ma hazie usoro ikikere mgbe ịgbanyere kọmputa. Anyị ga-eji Pro-version nke Revo Uninstaller, ebe ọ bụ na nke a bụ nke na-enye ọrụ kachasị mma. Tụlee isi ihe dị n'iji usoro a.
Wepu ihe ọhụrụ nke Revo Uninstaller
Otu esi eji Revo Uninstaller
1. Mbụ, budata ihe omume ahụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke onye mmepụta. Enwere ike ime nke a n'efu, ma mgbe ụbọchị 30 gachara, ị ga-azụta ụdị zuru ezu.
2. Anyị na-eme ka echichi na kọmputa.
Revo Uninstaller ga-arụ ọrụ na akaụntụ onye nchịkwa, ma ọ bụ n'aha ya.
3. Gbaa usoro ihe a. Tupu anyị mepee menu na ike ya. Tụlee ihe kacha mkpa.
Otu esi ewepu iji Revo Uninstaller
Nbudata mmemme site na iji Revo Uninstaller dị iche na otu usoro ahụ site na iji usoro mmemme na Windows, n'ihi ya, a ghaghị ịtụle ya n'ụzọ zuru ezu.
1. Gaa na taabụ "Uninstaller" wee họrọ site na ndepụta nke mmemme ahụ nke chọrọ ka ehichapụ.
2. Pịa bọtịnụ "Hichapụ". Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ebido usoro iwepụ ihe omume ahụ. Maka ngwa ọ bụla, ọ nwere ike ịdị iche. Anyị na-ama akara ndị dị mkpa, na-agbaso ihe ndị ahụ. Mgbe ịchichapụsịrị, onye nchịkọta ga-akọ banyere mmezu nke usoro ahụ.
3. Ugbu a kachasị mma. Revo Uninstaller na-enye gị ike iṅomi kọmputa gị maka faịlụ ndị fọdụrụ na usoro mmemme. Enyocha ike nwere ike ịrụ ọrụ na ụzọ atọ - - "Nchekwa", "Agaghị oke" na "Di elu". Maka mmemme dị mfe, ọnọdụ dị oke ala ga-ezu. Pịa bọtịnụ "Iṅomi".
4. Nyocha na-ewe oge ụfọdụ, mgbe e mesịrị windo na-egosi na ndekọ na faịlụ ndị fọdụrụ mgbe nhichapụ gosipụtara. Pịa "Họrọ niile" na "ehichapụ." Usoro nke iwepu ihe omume ahụ agwụla!
5. Mgbe nhichapụ, windo nwere ike ịpụta na faịlụ ndị ọzọ na usoro ahụ na-enye ka ihichapụ. Ịkwesịrị iji nlezianya nyochaa ndepụta ahụ wee họrọ ihichapụ naanị faịlụ metụtara usoro ihe omume a ga-ehichapụ. Ọ bụrụ na ịnweghị n'aka, gbasaa nzọụkwụ a n'enweghị nhichapụ ihe ọ bụla. Pịa "mecha".
Kedu ka esi eme nchọgharị na-eji Revo Uninstaller
Ka oge na-aga, ndị na-eme ihe nchọgharị ejikọta nnukwu ozi nke ozi na-enweghị isi na-ewe ohere n'elu diski ike. Iji wepụ ohere, soro usoro dị n'okpuru ebe a.
1. Mepee Revo Uninstaller, gaa na taabụ Cleaner taabụ.
2. Lelee igbe maka ihe dị mkpa ka a kpochaa n'ime ihe nchọgharị ahụ achọrọ, wee pịa "Kọwaa".
Ndị nchọgharị nchacha, kwadebere maka eziokwu ahụ bụ na mgbe nke a gasịrị, ọtụtụ saịtị ga-achọ ịbanye nbanye na okwuntughe.
Otu esi ehichapu ndekọ na diski ike
1. Gaa na taabụ "Cleaner Windows".
2. Na windo nke gosipụtara, kaa akara igbe dị mkpa dị na "Ụzọ na ndekọ" na "Ndepụta na diski diski". Na windo a, ị nwere ike ịhọrọ ịhapụ bichaa ma kpochapụ faịlụ Windows oge.
3. Pịa "Kọwaa"
Esi edozi mmemme maka ikike site na iji Revo Uninstaller
Usoro ihe omume a ga enyere aka ikenye ngwa ndị ị ga-achọ ozugbo ị gbanyechara kọmputa.
1. Mepee Revo Uninstaller ma malite "Ntọala Manager" taabụ.
2. N'ihu anyị bụ ndepụta nke mmemme, akara ntinye gụnyere nke pụtara na usoro ahụ ga-amalite na akpaghị aka.
3. Ọ bụrụ na enweghị mmemme na listi ahụ, pịa "Tinye" na na windo na-esote anyị ga-ahụ usoro a chọrọ site na ịpị bọtịnụ "Na-agagharị"
4. A ga-agbakwunye ihe omume ahụ na ndepụta ahụ, mgbe nke a gasịrị, ọ ga-ezuru igbe na-esote ya iji rụọ ọrụ ikike.
Hụkwa: Ngwọta kachasị mma maka nkwụsị kpamkpam mmemme
Anyị kpuchiri isi nke iji Revo Uninstaller. Ihe omume a abụghị naanị onye na-ewepu ya. Ọ ga - enyere gị aka ịgbaso usoro na kọmputa gị n'ụzọ dị irè karị ma debe ya n'ụzọ dị mma!